संरचनागत आधारबाट प्रहरीमाथि नैतिक प्रश्न उठाएका हौंः रञ्जित तामाङ (भिडियो अन्तरवार्ता) - TV Annapurna
October 8, 2018 October 16, 2018 Annapurna TV
नविना कमरेड र मेरो बिचमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
पछिल्लो समय देशमा बलात्कार र महिला हिंसाका घटनामा वृद्धि भएको देखिन्छ । शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति जनताले महसुस गर्न नपाएको बताउँदै आएका छन् । अपराधी पत्ता लगाउने भन्दा पनि जोगाउनमा स्वयम् प्रहरीको संलग्नता रहेको आरोप मात्रै होइन तथ्य समेत बाहिर आयो ।
सत्तारुढ दल नेकपा निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल र अखिल क्रान्तिकारीले प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई ज्ञापन पत्र समेत बुझायो ।
जनताको जिउधनको सुरक्षामा सिङ्गो संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन असक्षम भएको भन्दै प्रहरी प्रमुखलाई तत्काल बर्खास्त गर्न गर्नु पर्ने उनीहरूले माग गरे ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकताको सूत्रमा बाँधिएको पनि छ महिना पुग्न लाग्यो । विभिन्न निकट सङ्गठन र भातृ संस्थाको एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । दुई विद्यार्थी सङ्गठनको एकता कहाँ पुग्यो र कसरी हुँदै छ ? यी लगायत समसामयिक विषयमा अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङसँग टिभी अन्नपूर्णकर्मी विनोद देवकोटाले गरेको कुराकानी
-तपाइहरूले प्रहरी महानिरीक्षकको राजीनामा माग गर्नु भएछ ?
-राजीनामा नै माग्नु पर्ने कारण के थियो ?
गत साउन १० गते राति निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भयो । देशमा बढ्दै गएको बलात्कार र हत्या हिंसाका घटना र जनताको जीउ धनको सुरक्षा गर्न संयुक्त विद्यार्थीको तर्फबाट १६ गते ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ । हामीले सरकारलाई भनेका थियौँ । जनताको जिउ धनको सुरक्षा गर्ने जिम्मा प्रहरीको हो र सुरक्षा निकायको हो । सङ्घीय लोकतन्त्रको समयमा जनताले स्वतन्त्र रूपमा हिँड्न डुल्न र बाच्न पाउनु पर्छ ।
सरकारले विभिन्न छानबिन समिति पनि बनायो । हामीले ठानेका थिउनौं । कि यतीका दिनसम्म यो घटना अपराधी पत्ता लगाउन नसकेर क्रिटिकल हुन्छ। हामीले के ठानेका थियौँ भने सरकारले यसलाई गम्भीरता पूर्वक लिन्छ । निर्मला पन्तका परिवारलाई न्याय दिलाउँछ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर यो घटनाको ७०/७५ दिनमा पनि प्रहरीले घटनाका दोषी पक्रन सकेन । न्यायको निम्ति विभिन्न आन्दोलन भए । प्रहरीको क्रफ्यु लाग्यो । प्रहरीको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भयो । केही घाइते भए, शान्ति सुरक्षा भएन ।
-लामो समयसम्म मौन बस्नु भयो । एकै चोटि राजीनामा माग्नु अलि बढी नै भएन र ?
बढी होइन, यो श्रृङखलामै छ । सरकारले पहिला एसएसपी उत्तम सुवेदीको नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति बनायो । एसपीलाई निलम्बन गर्‍यो, प्रहरी अधिकृतलाई निलम्बन गर्‍यो । अब तुरुन्तको तुरुन्तै न्याय दिलाउनुस् भनेर हामीले आन्दोलन गर्न वा कुनै नैतिक प्रश्न उठाउन जायज थिएन । त्यसपछि एसएसपी नेतृत्वको छानबिन समिति विघटन गरेर डिआइजी धिरु बस्न्यातको नेतृत्वमा अर्को छानबिन समिति बनायो ।
हामीलाई लाग्यो प्रहरीले अहिले पनि गम्भीरता पूर्वक लिएको छ । अब अपराधी पत्ता लाग्छ र निर्मलाले न्याय पाउँछिन् । अपराधीहरू कानुनको कठघरामा आउँछन् । त्यसले पनि सत्य तथ्य पत्ता लाउन सकेन । अपराधीसम्म पुगेन । निर्मलालाई न्याय दिन सकेन । त्यसपछि सरकारले सहसचिव हरि प्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनायो । त्यो समितिले प्रतिवेदन बुझायो । त्यो प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएन । सम्भवतः सरकारले अब सार्वजनिक गर्ला । गृहमन्त्रीले पनि छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको छ । अहिले पनि हेर्नुस् अपराधका श्रृङखलाहरु बढिरहेको छ । निर्मलाले न्याय नपाउने ? दोषी अहिलेसम्म पत्ता नलाग्ने ।
-यही राजीनामाको विषयमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । सङ्गठन भित्र छलफल नै नगरी राजीनामा माग गर्नु भएछ ?
बलात्कारीलाई सजाय हुनुपर्छ र दण्ड हुनु पर्छ भन्ने विषयमा सङ्गठनले निर्णय गरिरहनु पर्दैन । हत्याराहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै निर्णय गर्नु पर्दैन । सङ्गठनको विधि र पद्धति अनुसार केही अधिकार छन् । यो हामीले पहिलो चोटि गरेको पनि होइन ।
मलाई न्याय दिलाउने क्रममा संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन, दुई वटा अखिलको बैठक बसेर निर्णय गरेका छौँ । यो त्यसैको निरन्तरता हो ।
-एउटा व्यक्तिको राजीनामा माग गर्दा सङ्गठनमा छलफल गर्नु पर्ने होइन र ?
सङ्गठनको अध्यक्षका केही अधिकार हुन्छन् । कुनै पनि तत्कालीन घटनामा सङ्गठनको आधिकारिक धारणा बनाउन सक्छ । त्यसमा कोही साथीहरूको फरक मत भयो भने । छलफल हुन सक्छ ।
-यो राजीनामा माग गर्ने अवस्था कसरी तत्काल भयो ? घटना भएको दुई महिना बढी भयो । अहिले राजीनामा माग गर्नु भएको छ यत्रो समयमा सङ्गठनमा छलफल गर्न सकिएन ?
होइन हाम्रो धेरै पटक छलफल भएको छ । हामी बैठक बसेका छौँ । हामीले कुरा गरेका छौँ । निर्मलालाई न्याय दिनु पर्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ । ल मानौँ, हामीले गरेको निर्णयमा कतिपय साथीहरूलाई चित्त बुझेन । ती साथीहरूले फेसबुकमा लेख्ने ? यो गलत कुरा हो । कसैलाई चित्त बुझेन भने विधानतः छलफलको माग गर्नु पर्छ । अध्यक्षसँग छलफलको टाइम माग गर्नु पर्छ । यो बारेमा किन यस्तो निर्णय गरियो वा किन ज्ञापन पत्र बुझाइयो ? आफ्नो धारणा अध्यक्षकोमा राख्ने । अध्यक्षकोमा चित्त बुझेन भने बैठकको माग गर्ने, बैठकमा पनि त्यो कुरा पुरा भएन भने अन्य कमिटीमा राख्ने हो । यो प्रकारको विधि र प्रक्रिया छ । विधि र पद्धतिबाट अलग गएर कसैलाई केही इन्ट्रेस लाग्ला, हामीसँग २ सय ४३ जनाको केन्द्रीय समिति छ, ३३ जनाको पदाधिकारी छ । उनीहरूका ३३ थरी विचार होलान् । ३३ जनालाई चित्त नबुझ्ला । सबैले फेसबुकमा लेख्ने ?
-तर पनि सङ्गठनको सामूहिक बिचार बनाउनु पर्छ कि पर्दैन ?
यो सामूहिक बिचार नै हो ।
-कसरी सामूहिक भयो ? दुवै सङ्गठनका उपाध्यक्ष र महासचिव लगायतले विरोध जनाउनु भएको छ ?
विरोध कसले जनायो मलाई त्यो थाहा छैन । मलाई औपचारिक रूपमा कसैले भनेको छैन । कुनै बलात्कार वा हत्याको विरोधमा बोल्नु हुँदैन भनेर मेरो कुनै सदस्यले भन्छ भने । म स्पष्ट भन्न चाहन्छु । अखिल क्रान्तिकारी मण्डले सङ्गठन होइन । यसले जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने हो । अहिले जनताको आवाज के छ ? त्यो आवाज अखिल क्रान्तिकारीले बोल्ने हो ।
-खै जनताको विषयमा बोलेको ? एकै पटक प्रहरी प्रमुखको राजीनामा पो माग्नु भयो ?
यो गलत कुरा हो । हामीले साउन १६ गते यस बारेमा गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ । यो सङ्गठनले जनताको आवाजकोविरुद्दमा बोल्ने होइन । म भन्न चाहन्छु । निर्मलालाई न्याय दिनु पर्छ भन्ने सङ्गठनको निर्णय होइन ?
-तर पनि एउटा व्यक्तिको राजीनामाको विषयमा छलफल हुनुपर्थ्यो भन्ने वहाँहरूको भनाई ठिकै होइन ?
व्यक्तिको होइन । तपाईँ यसो नभन्नुस् । रञ्जित तामाङ व्यक्ति मात्रै होइन यो सङ्गठनको फस्ट पर्सन हो । त्यस्तै प्रहरी प्रशासनको फस्ट पर्सन को हो ? प्रहरी प्रवक्ताले स्वीकारेका छैनन् र ? प्रहरी प्रशासनको गम्भीर लापरबाही भयो । प्रहरी अनुसन्धानमा खटिएका मानिहरुले त्यहाँ गलत गरे । त्यसमा वहाँहरूको ध्यान पुग्न सकेन, जवाफदेहिताको कमी भयो । त्यसै निलम्बन गरिएको छैन ? प्रहरीले गल्ती स्वीकार गरेको छ नि । मेरो कुनै कार्यकर्ताले गलत गर्‍यो भने मैले जिम्मा लिनु पर्छ कि पर्दैन रु संरचनागत आधारबाट हामीले त्यही नैतिक प्रश्न उठान गरेका हौँ ।
-राजीनामा माग्ने बित्तिकै समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ? समाधानका लागि रचनात्मक सहयोग गर्नु पर्ने होइन र ?
राजीनामा दिने बित्तिकै भन्ने होइन । हामीले रचनात्मक नै कुरा गरेका छौँ । अपराधीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी अझै इफोर्टका साथ लाग्नु पर्‍यो । प्रहरीले अपराधीलाई पक्राउ गरोस् । जनतामा प्रहरी प्रतिको विश्वास कायम रहोस् भन्ने हाम्रो भनाई हो ।
प्रहरीले अपराधी पक्राउ गरोस् कसैले राजीनामा दिनै पर्दैन । तपाई कै माउ पार्टी अहिले सत्तामा छ । सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
-यस्तो बेला आफ्नै माउ पार्टीको सरकारलाई कमजोर बनाउने रणनीतिका रूपमा पनि कतिपयले यसलाई लिए ?
होइन, मैले यही कुरा तपाईँलाई भनी रहेको छु । यो हिजोको जस्तो सत्ताले जे गर्छ अन्धो भक्त भएर लाग्ने मण्डले विद्यार्थी सङ्गठन होइन ।
-प्रहरी प्रशासन गृहको मातहतमा हुन्छ । प्रहरीलाई देखाएर गृहलाई हानेको बाण हो भन्ने पनि आलोचकहरू भन्छन् ? गृहलाई कमजोर बनाउन यसो गर्नु भएको हो ?
यो कसलाई कमजोर बनाउने र कसलाई बलियो बनाउने भन्ने कुरै होइन । देशको कानुनलाई स्थापित गर्ने कुरामा, जनताको जीउ धनको सुरक्षा गर्नु पर्छ भनेर यो गरिएको हो ।
-यसमा गृहको दोष छ की छैन ?
गृहको पनि कुरा हुन सक्ला । यसको नैतिक जिम्मेवारी त सरकारले नै लिनु पर्छ । तर अपराधमा सबभन्दा पहिला को जान्छ ? प्रहरी हो नि ।
-पार्टी एकता भएको ६ महिना पुग्न लाग्यो । विद्यार्थी सङ्गठनको एकता प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
हाम्रो अखिल क्रान्तिकारी र अनेरास्ववियुको एकता पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हामीले धेरै कुरा टुङग्याई सकेका छौ ।
-राजनीतिक कुरा सबै टुङ्ग्याउनु भयो । तर नेतृत्वको विषय बाँकी छ ?
नेतृत्वको बारेमा टुङ्ग्याउन बाँकी छ ।
-कसरी टुङ्गीन्छ नेतृत्वको विषय ? सङ्गठनको नेतृत्व कसले गर्छ ?
एउटा नीतिका आधारमा हुन्छन् । पार्टीको एउटा अन्तर पार्टी निर्देशन अनुसार वरिष्ठता, दक्षता, क्षमता र एकताको मनोविज्ञानको आधारमा हुने हो । स्वाभाविक रूपले वरिष्ठताका आधारमा जाँदा खेरि दुइटा अध्यक्ष मध्येबाट एक अथवा पार्टीको जस्तै ।
-केही छलफल त भएको होला नि ? कसले नेतृत्व गर्छ, अनेरास्ववियुले वा क्रान्तिकारीले ?
त्यस बारेमा सामान्य छलफल भएको छ । पार्टीले त्यसको निर्णय गर्छ । स्वाभाविक रूपमा नबिना कमरेड र मेरो बिचमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । हामी दुई मध्ये एकले गर्ने । कहिलेसम्म महाधिवेशन गर्ने भन्ने पनि छलफल भएको छ । तर हामी निष्क्रसमा पुगी सकेका छैनौँ । यसलाई निचोडमा पुर्‍याउने जिम्मा चाहिँ पार्टीको सचिवालय र दुइटा अध्यक्षले एउटा नीतिका आधारबाट गर्नुहुन्छ ।
-कहिलेसम्म टुङ्गीन्छ होला विद्यार्थीको एकता प्रक्रिया ?
हामी छिट्टै टुङग्याउ छौँ । सम्भवतः अब बस्ने पार्टीको बैठकले यस बारे निर्णय गर्ला ।
-रञ्जित तामाङ विद्यार्थीको नेतृत्वमा आउने सम्भावना कत्तिको छ ?
सम्भावना छ । छैन पनि भन्न सकिँदैन । हामीले यो नै हुन्छ भन्ने अहिले नै डिक्लिएर गर्ने भन्दा पनि सहमतिमै टुङ्ग्याउने कुरा हो ।
तपाइहरू आन्तरिक रूपमा पनि छलफलमा हुनुहुन्छ । केही न केही त होला नि त आन्तरिक सहमति ? आन्तरिक सहमति त होला नि ?
त्यस्तो आन्तरिक कुराकानी पनि केही छैन । स्वाभाविक रूपले नबिना कमरेड सांसद भई सक्नु भएको छ । वहाँको कार्य अवधि पनि सकिएको छ । म निर्वाचित भएर आएको र मेरो कार्य अवधि पनि बाँकी रहेकोले अहिलेको सङ्गठनमा सबै कुरा हेर्दा त्यो आवश्यकता जास्तो र बाध्यता जस्तो पनि छ ।
-नबिना जी तपाईँलाई अध्यक्ष दिन सहमत हुनुहुन्छ ?
होइन, सहमति र असहमतिको कुरा छैन । असहमत त अरू पनि हुनुहुन्न ।
-विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्व अहिलेको जुन नेतृत्व छ । अनेरास्ववियुको र अखिलको यो भन्दा दोस्रो तहबाट आउने सम्भावना छ की छैन ?
असाध्यै न्यून छ ।
उपत्यकाका तीन स्थानमा प्रहरी प्रमुख हेरफेर